ओयामका हिजोदेखि आजसम्मका जनप्रतिनिधिहरु « Mechipost.com
ओयामका हिजोदेखि आजसम्मका जनप्रतिनिधिहरु
प्रकाशित मिति: १२ कार्तिक २०७७, बुधबार १४:०२
राणाकालमा सुब्बाहरुको शासन चल्थ्यो लिम्वुवानमा । त्यहाँका जग्गाजमिनका तिरो भारो स्थानिय प्रशासन ढ्याग्रो मुग्रो सबै सुब्बाहरुको हातमा थियो । अहिलेको जस्तो जनप्रतिनिधि, सरकारी अड्डाअदालत, मालपोत, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन केही पनि थिएन । सुब्बाहरुले आफ्नो सहयोगीको रुपमा कारबारी, बुड्यौली, थरी, मुखिया राखेका हुन्थे । तिनैले गाउँको सबै खाले काम कारबाही गदर््थें । ओयाममा पनि त्यतिबेला जिम्मावाल सुब्बाहरु थिए ।
सुब्बाको पनि अझैं ठूलो आगे सुब्बा हुन्थ्यो । त्यस्ता आगे सुब्बा ओयाम सामाङखुमा माहात्पाल सेलिङका छोराहुँदै माहाशेर सेलिङ र उनका छोरा नरबहादुर सेलिङ थिए भने यता ओयाममा सुब्बा रुपमान सेलिङ, फौदसिङ सेलिङ, हर्कसिङ सेलिङ जस्ता याङवरकका नामुद सुब्बाहरुले यो भेगमा सबै काम कारबाही गर्दथे । जब २००७ सालपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो र २०१५ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न हुँदै २०१७ साल पुष १ गतेबाट पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुवात भयो तब नेपालभरि स्थानीय, जिल्ला, अञ्चल र राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन भयो । त्यसपछिबाट ओयामले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु प्राप्त गर्दै आएको छ ।
पञ्चायतको प्रारम्भ भएपछि २०१९ सालमा प्रथम गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनबाट ओयाम गाउँ पञ्चायतको प्रथम प्रधानपञ्चका रुपमा दुर्गाप्रसाद खरेललाई निर्वाचित ग¥यो भने उप–प्रधानपञ्चको रुपमा ताराप्रसाद मिश्रलाई निर्वाचित ग¥यो । दुर्गाप्रसाद खरेलको कार्यकालमा ओयाममा उल्लेख्य काम भएको बताउँछन् यहाँका जिवित बुढापाकाहरु । श्री गुप्तेश्वर प्रा.वि.को स्थापना र सो विद्यालयको नाम गुप्तेश्वर जुराउने व्यक्ति नै दुर्गाप्रसाद खरेल हुनुहुन्थ्यो । दुर्गाप्रसाद खरेलले हालको स्कूल डाँडामा एउटा ढाल्नेको सेउलाले बारेर उहाँ स्वयमले पढाउनुहुन्थ्यो । उहाँको ओयाममा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान छ । उहाँले नै स्थापना गर्नुभएको गुप्तेश्वर विद्यालय हाल ओयामको एक मात्र मा.वि.को रुपमा सञ्चालित छ । पछि उहाँको स–परिवार झापाको विर्तामोड आसपासमा बसाई सरेर मधेस झरी जानुभयो । उहाँकै कार्यकालका उप–प्रधानपञ्च ताराप्रसाद मिश्रको परिवार पनि सबै झापा चारपानेतिर झरी जानुभयो । उहाँहरुका सबै घर जग्गाजमिन आगे सुब्बा नरबहादुर सेलिङका छोराहरुले खरिद गरि लिएका थिएँ ।
उसबेला हरेक तीन वर्षमा गाउँपञ्चायतको निर्वाचन हुनेगद्थ्यो । २०१९ सालदेखि २०२१ सालसम्म दुर्गाप्रसाद खरेल र ताराप्रसाद मिश्रले प्रधानपञ्च र उप–प्रधानपञ्च भएर नेतृत्व गरेको ओयाममा २०२१ सालको निर्वाचनमा बुद्धिमान योङया ओयामको दोस्रो प्रधानपञ्च निर्वाचित हुनुभयो । बुद्धिमान योङयासँग उप–प्रधानपञ्चमा भुवानी खरेल निर्वाचित हुनुभएको थियो । बुद्धिमान योङयाको पालामा पनि निकै उल्लेख्य कामहरु सम्पन्न भएका छन् ओयाममा । उहाँले २०२५ सालसम्म नेतृत्व गर्नुभयो । बुद्धिमान योङया गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च हुँदै जिल्ला सदस्य र अञ्चल सदस्यसम्म निर्वाचित हुनुभएका एक ओयामका ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो ।
तेस्रो स्थानीय निर्वाचन २०२५ सालमा सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनबाट ओयामको तेस्रो प्रधानपञ्च मनरथ पोखरेललाई प्राप्त ग¥यो । ओयाममका मुखिया, जमिनदार, ढाँडे पोखरेल अर्थात् पण्डित जयनारायण पोखरेलका कान्छा छोरा मनरथ पोखरेल उसबेलाका पढालेखा जननिर्वाचित प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफू स्वयम् गुप्तेश्वर मा.वि.मा बसेर रेखदेख गर्ने पढाउने, जनताको सेवा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको कार्यकालमा समेत ताराप्रसाद मिश्र पुनः उपप्रधानपञ्च निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँहरुले २०२५ सालदेखि २०२७ सालसम्म ओयामको नेतृत्व गर्नुभयो ।
ओयामका निर्वाचित प्रधानपञ्चहरुमा निकै शक्तिशाली प्रधानपञ्च भने चौथो प्रधानपञ्च मनबहादुर सेलिङ (साइला सुब्बा) लाई लिने गरिन्छ । मनबहादुर सेलिङ उसबेलाका प्रख्यात आगे सुब्बा स्व. नरबहादुर सेलिङका साइला छोरा हुनुहुुन्थ्यो । त्यसैले उहाँलाई साइला सुब्बाको नामले पनि त्यतिकै चिन्ने गरिन्थयो । सुब्बा नरबहादुर सेलिङको प्रभाव, इज्जत र सम्मानका कारण पनि उहाँलाई निकै शक्तिशाली र प्रभावशाली प्रधानपपञ्चको रुपमा लिने गरिन्थ्यो भनेर जीवित साक्षी बुढापाकाहरु बताउँछन् ।
उहाँकै कार्यकालमा ओयामको गुप्तेश्वर मा.वि.ले जग्गा प्राप्त ग¥यो र विद्यालयको भवन बन्यो । मनबहादुर सेलिङ प्रधानपञ्च निर्वाचित हुँदा मनप्रसाद गुरुङ उप–प्रधानपञ्च निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँहरु सबैको निधन भइसकेको छ । चौथो प्रधानपञ्च मनबहादुर सेलिङ र उप–प्रधानपञ्च मनप्रसाद गुरुङले २०२७ सालदेखि २०३० सालसम्म ओयाम गाउँ पञ्चायतको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
पाँचौं गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन २०३० सालमा सम्पन्न भयो । पाँचौ प्रधानपञ्चको रुपमा ओयामले निकै हक्की व्यक्ति ध्रुवप्रसाद योङयालाई प्राप्त ग¥यो । ध्रुवप्रसाद योङया अवकाश प्राप्त बेलायती सेना हुनुहुन्थ्यो । बेलायती सेना भएकै कारण पनि उहाँलाई निकै हक्की र निडर प्रधानपञ्चको रुपमा लिइन्थ्यो । ध्रुवप्रसाद योङ्या ओयामका दोस्रो प्रधानपञ्च बुद्धिमान योङयाका सहोदर जेठा दाजु हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले पनि उहाँलाई आफ्नो कार्यकाल सहज रुपमा सञ्चालन गर्न सहयोग मिल्यो भनिन्छ ।
ध्रुवप्रसाद योङयासँग उप–प्रधानपञ्चको रुपमा टइन्द्रप्रसाद न्यौपाने निर्वाचित हुनुभएको थियो । ओयामका निकै चतुर र लेखनदासका रुपमा चिनिने टइन्द्रप्रसाद न्यौपाने २०३२ सालदेखि २०३९ सालसम्म दुई कार्यकाल उप–प्रधानपञ्च निर्वाचित हुने एक मात्र भाग्यमानी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । २०३० सालदेखि २०३२ सालसम्म नेतृत्व गरेका ध्रुवप्रसाद योङयाको टिमलाई २०३३ सालको गाउँपञ्चायत निर्वाचनले ओयामको छैठौं प्रधानपञ्चको रुपमा पूर्व उप–प्रधानपञ्च मनप्रसाद गुरुङलाई निर्वाचित ग¥यो । उप–प्रधानपञ्च हुँदै प्रधानपञ्च हुने मनप्रसाद गुरुङ नै प्रथम ओयामका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । मनप्रसाद गुरुङको कार्यकालमा समेत टइन्द्रप्रसाद न्यौपाने उप–प्रधानपञ्च निर्वाचित हुनुभयो र उहाँले दुई कार्यकाल उप–प्रधानपञ्च हुने अवसर पाउनु भयो ।
सातौं गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन २०३९ सालमा भयो । २०३९ सालको निर्वाचनमा पदमबहादुर चौहानलाई प्रधानपञ्चमा निर्वाचित ग¥यो । निकै इमान्दार, भद्र भलाद्मी जनप्रतिनिधिको रुपमा चिनिनु हुन्थ्यो पदमबहादुर चौहान । चौहान भूतपूर्व बेलायती सेना समेत हुनुहुन्थ्यो । ओयामको विकासमा निकै ठूलो भूमिका रहेको प्रधानपञ्चको रुपमा चिनिनुहुने पदमबहादुर चौहानको कार्यकालमै ओयाम गुप्तेश्वर नि.मा.वि. प्रस्तावित मा.वि. सञ्चालन भयो भने १२ कोठाको दुई तले भवन निर्माण भयो । पदमबहादुर चौहानसँग उप–प्रधानपञ्चको रुपमा कृष्णबहादुर सेलिङ निर्वाचित हुनुभएको थियो । ओयामका हालसम्मका जीवित प्रधानपञ्चका रुपमा पदमबहादुर चौहानलाई पाउन सकिन्छ । उहाँ ओयामका अभिभावक हुनुहुन्छ । हाल आफ्नो परिवार सहित उहाँ बेलायत बसोबास गर्दै आउनु भएको छ ।
२०४३ सालमा पुनः गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनबाट आठौं प्रधानपञ्चको रुपमा आगे सुब्बा तथा लाहुरे धनबहादुर सेलिङ युवा प्रधानपञ्चको रुपमा प्राप्त भयो । निकै शालीन, इमान्दार, धनाढ्य, जमिनदार प्रधानपञ्चको रुपमा चिनिनुभएका धनबहादुर सेलिङ ओयामका लागि पञ्चायतका अन्तिम प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्त भएपछि पञ्चायतका सबै संरचनाहरु भङ्ग भएको थियो भने सबै निर्वाचित जन–प्रतिनिधिहरु निलम्बित भएका थिए । त्यै निलम्बित प्रधानपञ्चको पंतीमा धनबहादुर सेलिङ र उहाँसँगै निर्वाचित उप–प्रधानपञ्च कृष्णबहादुर योङया पनि पर्नुभयो । स्मरणीय के छ भने धनबहादुर सेलिङ आगे सुब्बा स्व. नरबहादुर सेलिङका नाति भएकाले उहाँ समेत जिम्मावाल आगे सुब्बा, लाहुरे र प्रधानपञ्चको नाम र उपाधिले परिचित हुनुहुन्थ्यो ।
२०४६ साल चैत्र २६ गते नेपालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको प्रारम्भ भयो । बहुदलीय अभ्यासको क्रममा नेपालमा २०४८ सालमा आमनिर्वाचन भयो । प्रतिनिधि सभा बन्यो । २०४९ सालमा नयाँ संरचनानुसार गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरु निर्वाचन भयो । उक्त ऐतिहासिक निर्वाचनबाट ओयामले नयाँ गाउँ विकास समितिका अध्यक्षको रुपमा प्राज्ञिक युवा नेता विरेन्द्रबहादुर योङयालाई निर्वाचित ग¥यो । विरेन्द्रबहादुर योङया ओयामका नवौं निर्वाचित जन–प्रतिनिधि बन्नुभयो । उहाँ बहुदलीय शासन व्यवस्था भरिका एकमात्र निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।
उहाँ २०४९ सालमा निर्वाचित हुनुभएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि २०५३ सालमा पुनः गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँसँग उपाध्यक्षको रुपमा २०४९ सालमा लक्ष्मीप्रसाद खनाल हुनुभएको थियो भने दोस्रो कार्यकालको लागि उपाध्यक्षमा पूर्व प्रधानपञ्च धनबहादुर सेलिङ निर्वाचित हुनुभएको थियो । विरेन्द्र योङयाको कार्यकालमा ओयाममा उल्लेख्य विकासका कामहरु सम्पन्न भएका छन् । उहाँकै कार्यकालमा गुप्तेश्वर मा.वि.ले कक्षा १२ सम्मको स्विृकति प्राप्त ग¥यो । ओयाममा मोटरबाटोको रेखाहरु कोरियो । थुप्रै सिचाइ र खानेपानीका कामहरु भए । साना जलविद्युत र जनस्वस्थ्य उहाँकै पालामा स्थापना भए । विरेन्द्रबहादुर योङयालाई ओयामको प्राज्ञिक जनप्रतिनिधिको रुपमा चिन्न सकिन्छ । उहाँ अझै पनि ओयामको विकास र सेवामा लागि रहनुभएको छ ।
माओवादी जनयुद्धका कारण देश झन्डै २० वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भयो । स्थानीय सरकारविहीन चल्यो । २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले २३७ वर्षे राजाको श्रीपेच उखेल्यो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । गणतन्त्र स्थापना भएरपनि स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न निकै कठिन भयो । लामो समयको प्रतिक्षापछि २०७२ सालमा नेपालमा गणतन्त्र प्राप्तिपछिको ऐहिासिक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । देशभरिका गाउँदेखि केन्द्रसम्मका संरचनाहरुको नामकरण परिवर्तन भयो ।
अब ओयाम गाउँ पञ्चायत, गाउँ विकास समितिदेखि याङवरक गाउँपालिका वडा नं.–३, मात्र भयो । याङवरक गाउँपालिका वडा नं.–३, ओयामको एघारौं निर्वाचित जनप्रतिनिधि अध्यक्षको रुपमा युवा नेता मविन्द्र योङयालाई कान्छो तथा वर्तमान अध्यक्षको रुपमा प्राप्त ग¥यो । मविन्द्र योङया ओयामका लागि सबैभन्दा कान्छो र गणतन्त्र पछिका वडाअध्यक्ष एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।
यसरी ओयामले २०१९ सालबाट हालसम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न संरचनानुसार माथि उल्लेखित ११ जना प्रमुख जनप्रतिनिधिहरुलाई प्राप्त ग¥यो । उहाँहरुको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जेजस्तो माध्यमबाट भएपनि ओयाम प्रति सकरात्मक भूमिका र ओयाम ओयामेलीहरुको हक हितमा उल्लेख्य योगदान रहि आएको छ र रहनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । ओयामले ती ऐतिहासिक ओयामे जनप्रतिनिधिहरुको सदैव सम्मान, कदर र सम्झना गर्नेछ ।